မပေါ့ဆသငျ့တဲ့ ဆီးအနံ့ နံရတဲ့ အကွောငျးရငျး… – Shwe Naung
မပေါ့ဆသငျ့တဲ့ ဆီးအနံ့ နံရတဲ့ အကွောငျးရငျး…
ဆီးဟာ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျတှေ အပွီးမှာ ခန်ဓာကိုယျထဲမှာရှိတဲ့ ကြောကျကပျက စှနျ့ထုတျလိုကျတဲ့ အရညျဖွဈပါတယျ။သငျသှားလိုကျတဲ့ အဝါရောငျရှိနပွေီး ပုံမှနျအနံ့တဈခုတော့ရှိပါတယျ။ ဆီးဟာ ဆီးပုံမှနျထကျပိုပွီး အနံ့ပွငျးနမေယျဆိုရငျဒီအခကျြတှကွေောငျ့လားဆိုတာ လလေ့ာဆနျးစဈသငျ့ပါတယျ။
ရသေောကျနညျးတဲ့အခါ ဆီးဟာ ပမာဏနညျးပွီး အနံ့ပွငျးနတေတျပါတယျ။ ဆီးနညျးပွီး အနံ့ပွငျးနပွေီဆိုရငျ မိမိရသေောကျတာ မလုံလောကျဘူးဆိုတဲ့ အနအေထားကီ သတိရပွီး ရပေိူသောကျဖို့ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။
– သငျကအနံ့ပွငျးတဲ့အစားအစာ စားမိလို့လား?
မွနျမာနိုငျငံ အနနေဲ့ အနံ့ပွငျးတဲ့ အစားအစာရယျလို့လူသိမြားတာတော့ ဓညငျးသီးပဲဖွဈပါလိမျ့မယျ။ အခွား ကညှတျ နဲ့ ဆီးအနံ့ပွငျးခွငျးဖွဈပျေါစပေါတယျ။
– သငျသောကျနတေဲ့ ဆေးအခြို့ကွောငျ့လား?
တီဘီဆေး Rifampicin တို့ သှေးကြဲဆေး Wafarin တို့ဟာဆီးကို အရောငျရော အနံ့ရောပွောငျးလဲစပေါတယျ။
– အားဆေးထဲမှာ ဗီတာမငျ B6 ပါနလေို့လား?
အားဆေးသောကျပွီးတဲ့နကေ့စပွီး ဆီး ပိုလညျး ဝါတယျ။ အနံ့လညျး ပိုနံလာတယျဆိုရငျတော့ အားဆေးထဲမှာ ဗီတာမငျ B6 ပါနလေို့ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒီအနအေထားဟာ စိတျအနှောကျအယှကျသိပျမဖွဈစဘေူးဆိုရငျ အားဆေးကို ဆကျလကျသောကျသုံးလို့ရပါတယျ။ ရှားရှားပါးပါး ဆီးအနံ့နံနိုငျတဲ့ အနအေထားတှကေတော့ …
– ဆီးခြိုရောဂါရှိနတေဲ့ အခြိနျဆီးအမြားကွီးသှားပွီး သကွားနံ့ရနတောပိနျသှားတာ ရအေရမျးငတျတာမောပနျး နှမျးနယျနတော အနာကကျြမလှယျနာတှေ ရှိနပွေီဆိုရငျတော့ ဆီးခြိုဖောကျစဈတာ ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျတာတှလေုပျသငျ့ပါတယျ။
– ကြောကျကပျကြျောတညျနတေဲ့အခြိနျဆီးအနံ့ပွငျးတာတှအေပွငျကိုမှ ကြောကုနျးနရောအောငျ့တာဆီးသှားရငျကငျြတာ အောငျ့တာ ဆီးထဲမှာ သှေးတှပေါလာပွီဆိုရငျတော့ ဒါဟာ ဆီးလမျးကွောငျးကြောကျတညျနတေဲ့ လက်ခဏာတှဖွေဈနနေိုငျပါတယျ။
– အသညျးရောဂါတှကွေောငျ့ဆီး အနံ့ပွငျးတာနဲ့အတူ အသားဝါတာ မကျြလုံးဝါတာတှေ ဖွဈနရေငျတော့ အသညျးကို စဈဆေးဖို့ မမလေို့ကျပါနဲ့အခြုပျပွောရရငျတော့ ဆရာဝနျကို မဖွဈမနသှေားပွသငျ့တဲ့ ဆီးအနံ့နံခွငျးတှကေတော့ …
– ဆီးမထိနျးနိုငျတာ ၊ဆီးအကွာခဏသှားခွငျနတော
– ဆီးသှားရငျ ပူပွီး အောငျ့နတော
– ဗိုကျအောငျ့ပိုငျးနဲ့ ခါးတဈလြှောကျ ကိုကျတာ အောငျ့တာ
– အလှနျဒေါသထှကျနတေတျတာ စတဲလက်ခဏာတှရှေိနပွေီဆိုရငျတော့ မပေါ့ဆနပေါနဲ့တော့ ဆီးပဲ နံမှာပဲဆိုတဲ့ အတှေးကို ထုတျပွီး ဆရာဝနျနဲ့တိုငျပငျကုသကွပါလို့။
crd မယျတငျ(ဆေး ၁) ဒေါကျတာဇီဝက
ဆီးဟာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ အပြီးမှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ ကျောက်ကပ်က စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ အရည်ဖြစ်ပါတယ်။သင်သွားလိုက်တဲ့ အဝါရောင်ရှိနေပြီး ပုံမှန်အနံ့တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ဆီးဟာ ဆီးပုံမှန်ထက်ပိုပြီး အနံ့ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကြောင့်လားဆိုတာ လေ့လာဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
ရေသောက်နည်းတဲ့အခါ ဆီးဟာ ပမာဏနည်းပြီး အနံ့ပြင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဆီးနည်းပြီး အနံ့ပြင်းနေပြီဆိုရင် မိမိရေသောက်တာ မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့ အနေအထားကီ သတိရပြီး ရေပိူသောက်ဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ။
– သင်ကအနံ့ပြင်းတဲ့အစားအစာ စားမိလို့လား?
မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ အနံ့ပြင်းတဲ့ အစားအစာရယ်လို့လူသိများတာတော့ ဓညင်းသီးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အခြား ကညွတ် နဲ့ ဆီးအနံ့ပြင်းခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။
– သင်သောက်နေတဲ့ ဆေးအချို့ကြောင့်လား?
တီဘီဆေး Rifampicin တို့ သွေးကျဲဆေး Wafarin တို့ဟာဆီးကို အရောင်ရော အနံ့ရောပြောင်းလဲစေပါတယ်။
– အားဆေးထဲမှာ ဗီတာမင် B6 ပါနေလို့လား?
အားဆေးသောက်ပြီးတဲ့နေ့ကစပြီး ဆီး ပိုလည်း ဝါတယ်။ အနံ့လည်း ပိုနံလာတယ်ဆိုရင်တော့ အားဆေးထဲမှာ ဗီတာမင် B6 ပါနေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအနေအထားဟာ စိတ်အနှောက်အယှက်သိပ်မဖြစ်စေဘူးဆိုရင် အားဆေးကို ဆက်လက်သောက်သုံးလို့ရပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါး ဆီးအနံ့နံနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေကတော့ …
– ဆီးချိုရောဂါရှိနေတဲ့ အချိန်ဆီးအများကြီးသွားပြီး သကြားနံ့ရနေတာပိန်သွားတာ ရေအရမ်းငတ်တာမောပန်း နွမ်းနယ်နေတာ အနာကျက်မလွယ်နာတွေ ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ ဆီးချိုဖောက်စစ်တာ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်တာတွေလုပ်သင့်ပါတယ်။
– ကျောက်ကပ်ကျော်တည်နေတဲ့အချိန်ဆီးအနံ့ပြင်းတာတွေအပြင်ကိုမှ ကျောကုန်းနေရာအောင့်တာဆီးသွားရင်ကျင်တာ အောင့်တာ ဆီးထဲမှာ သွေးတွေပါလာပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဆီးလမ်းကြောင်းကျောက်တည်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
– အသည်းရောဂါတွေကြောင့်ဆီး အနံ့ပြင်းတာနဲ့အတူ အသားဝါတာ မျက်လုံးဝါတာတွေ ဖြစ်နေရင်တော့ အသည်းကို စစ်ဆေးဖို့ မမေ့လိုက်ပါနဲ့အချုပ်ပြောရရင်တော့ ဆရာဝန်ကို မဖြစ်မနေသွားပြသင့်တဲ့ ဆီးအနံ့နံခြင်းတွေကတော့ …
– ဆီးမထိန်းနိုင်တာ ၊ဆီးအကြာခဏသွားခြင်နေတာ
– ဆီးသွားရင် ပူပြီး အောင့်နေတာ
– ဗိုက်အောင့်ပိုင်းနဲ့ ခါးတစ်လျှောက် ကိုက်တာ အောင့်တာ
– အလွန်ဒေါသထွက်နေတတ်တာ စတဲလက္ခဏာတွေရှိနေပြီဆိုရင်တော့ မပေါ့ဆနေပါနဲ့တော့ ဆီးပဲ နံမှာပဲဆိုတဲ့ အတွေးကို ထုတ်ပြီး ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကုသကြပါလို့။
crd မယ်တင်(ဆေး ၁) ဒေါက်တာဇီဝက